Maraykanka oo cunoqabatayn ku soo rogay Saraakiil ka tirsan Maxkamada ICC | Jowhar Somali news Leader
Home News Maraykanka oo cunoqabatayn ku soo rogay Saraakiil ka tirsan Maxkamada ICC
Maraykanka oo cunoqabatayn ku soo rogay Saraakiil ka tirsan Maxkamada ICC
Madaxwaynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa cunaqabatayn ku soo rogay saraakiisha maxkamada caalamiga ah ee ICC baaritaanka ku haya in Mareykanka ay dambiyo dagaal ka geysteen Afqanistaan iyo in kale.
Amarkan madaxwayne ayaa u oggolaanaya Mareykanka inay xayiraan hantida shaqaalaha maxkamada caalamiga ah ee ICC islamarkana ka hor istaagaya in ay Mareykanka soo galaan.
Mr Pompeo ayaa wacad ku maray in Mareykanka uu ka difaaci doono baaritaanadani. Tallaabooyiinka Taliban, dowladda Afqaanistaan iyo ciidamada Mareykanka ayaa tan iyo bishii May 2003 la filayay in baaritaan lagu sameeyo.
Dalka Afghanistaan ayaa xubin ka ah maxkamada ICC , balse sidoo kale saraakiisha dalkaasi ayaa muujiyay sida ay baaritaanada uga soo horjeedaan.